Dhegayso Spotify Music Free Via Spotify 3 monthsFree
1. Waa maxay Spotify ee 3 bilood oo lacag la'aan ah
2. Sida loo dalbado Spotify 3 bilood oo lacag la'aan ah
3. Sidee si ay u dhagaystaan ​​music free Spotify 3 bilood ka dib markii lacag la'aan ah
Maxay ee Spotify 3 bilood oo lacag la'aan ah
Waa mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee shirkadda Spotify in ay had iyo jeer saamaxaya kuwa isticmaala si aad u hesho adeegyada u fiican oo waqti isku mid ah ayaa sidoo kale la casriyeeyay adeegyada si heer sare ah si loo hubiyo in user helo fursad u cusboonaynta xisaabaadka iyo sidoo. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in user waa in la geeyo dhimis ah sakhiray ma aha oo kaliya in ay sameeyaan nolosha music sahlan laakiin sidoo kale si loo hubiyo in user helo heshiiska ugu fiican ee suuqa. Tutorial ayaa bari doonaa user sida loo sameeyo si fudud:
User wuxu sicir-dhimista ee ku dhow $ 9 bishiiba saddexda bilood ee ugu horeeya marka ay saxiixdo oo ah adeegidda iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa qalab ku maadaama ay tani in isticmaalka sameeyo qiimaha caymiska bandhigaysaa user la ad aan xad lahayn geeyo xor ah oo xaq ah oo uu leeyahay user waxba inuu ka faa'ideysto dalab taas loo sameeyo, laakiin waa inuu u saxiixo qorshaha premium markii ugu horeysay ka. Haa taasi waa qabsado in dalab waa mid ku habboon dadka isticmaala cusub kaliya oo ay hubiso in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay oo aan wax arrintan oo dhibaato ka dhigi kara.
User ayaa sidoo kale hubin karaa in sida ugu wanaagsan ee la siiyay shirkadda iyo haddii sabab kasta iyagoon ogayn oo ka mid ah xaqiiqooyin iyo tirooyin ka dibna hoogtay ay helin fursad aad u weyn. Waxaa sidoo kale in la xuso in user wuxuu heli doona dawlad la mid ah functionalities tahay oo aan wax qarashka dheeraadka ah in kuwa kalena waxa ay isticmaalaan heerka of 9.99 bishiiba marka ay timaado qorshe premium. In qorshahan sida caadiga ah user inay hubiyaan in 3 qalab la synced u offline diinta iyo dhagaysiga tan ayaa sidoo kale ku dhici kartaa isku mar aan wax shuruud dheeraad ah sidii loo gundhig gudahood adeegga ka dhigi kara.
Faa'iidooyinka la isticmaalayo qorshaha
The hore iyo faa'iido ugu horreeyey in user a ku raaxaysan karaan arrintan la xiriira waa xaqiiqda ah in lacagta waa la badbaadiyey oo user durba waa lagu badbaadinayo $ 27 3 bilood ah qorshahan marka loo eego qorshaha caadiga ah lacagta caymiska in la isticmaalo iyo sidoo kale.
Waxa kale oo ka dhigaysa user ku faraxsan yahay sida heerka adeegga ee aan la deprecated iyo user waa ay awoodaan in ay isticmaalaan adeegga aan ka kaaftoomi kasta ama arin la mid ah ruux oo qiiro sida caadiga ah dadka isticmaala lacagta caymiska. Waa mid ka mid ah heshiis ugu fiican in sidoo kale u oggolaan doona in shirkadda si loo hubiyo in macaamiisha ay u korodho iyo macaamiisha cusub waxaa la dagay shaqada soo gashay. Waxa kale oo hubin doona in dadka isticmaala ay u hubiso in ay bixiyaan $ 9.99 halkii bil ka dib markii ugu shishaysa Times yihiin. Faaidooyin kale waxaa jira iyo user inay hubiyaan in waxyaalahan waxaa loo riyaaqay adigoo booqanaya website-ka rasmiga ah Spotify ka dhigi kara.
2. Sidee ayaad u codsan Spotify 3 bilood oo lacag la'aan ah
Geedi socodka waa in la raaco arrintan la xiriira hoos ku qoran:
1. user wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in credit card ka diiwaangashan yahay si loo hubiyo in hannaanka horumarka sida xisaabta premium u baahan tahay kaarka deynta ah:
2. user ayaa markaas u baahan yahay inuu galo xisaabta si loo hubiyo in hannaanka horumarka,
3. user ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in xeerka in la soo siiyaa iibka xayaysiinta ayaa la galay oo ay tahay in la xuso in codes kuwaas oo dhab ahaan marka user booqasho ku warbaahinta iyo calaamadaha kor qorshaha caymiska markii ugu horeysay,
4. Spotify ayaa markaa waa in la isticmaalo si fudud oo ku qanacsan tahay:
3. Sidee inay dhegaystaan ​​music free ka dib markii Spotify 3 bilood oo lacag la'aan ah
Hoos waxaa ku qoran siyaabaha waa in la isticmaalaa in arrintan la xiriira si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican
1. Isticmaalka FB ah
a. Account Facebook waa in laga heli:
b. Page guriga waxaa ka dibna in ay soo booqdaan:
c. Codsiga waxaa markaas in lagu daro:
d. Guuleysatey browser dhammayn nidaamka:
2. offline hab ka iPhone
a. Codsiga waxaa ka mid ah adeegyada waa in la soo bixi:
b. Xisaabta waa in lagu qortey,
c. Playlists waxaa markaas in laga heli si loo hubiyo in hannaanka xudunta bilaabo:
d. Playlist waxaa markaas waa in la soo bixi in qalabka dhammayn nidaamka:
3. farsamo Android
Waa in la hubiyo in suuqa android waxaa qabsaday iyo in la hubiyo in ugu fiican dhacaya nidaamka uu soo hoos ku xusan waa in la raaco si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo si fudud oo ku qanacsan tahay:
a. Doorasho edit offline playlist waa in la soo xulay si ay u hubiyaan in habka horumarka sida ugu dhakhsaha badan codsiga ayaa laga bilaabey:
b. Playlist ku jirta su'aasha waa in la riixi si loo hubiyo in hannaanka ay hore u socto,
c. User ayaa markaas u baahan yahay si loo hubiyo in hab offline la soo xulay oo sabab la mid ah user awood u yeelan doonaan in ay dhegeysato muusikada lacag la'aan ah xitaa ka dib markii muddo ku dhiirrigelin hasa
Habka waxaa ku xusan sida soo socota:
a. Taariikhqorihii codka waa in laga soo degsan oo lagu rakibay:
c. Barnaamijka waxaa lagala soo bixi ka dibna in la bilaabay:
d. Heesta waxaa markaas la ciyaari doono:
e. Heesahaas ayaa ka soo bixi doonaa qaab la doonayo sida user iyaga oo doonaya inuu noqdo:
5. talooyin Desktop iyo tabaha
Geedi socodka waa mid fudud oo la raaco si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo:
a. Bogga internetka ee Spotify waa in la furay:
b. Account waxaa markaas in la casriyeeyay,
c. Macmiilka desktop waxaa markaas in la soo bixi inay dhegeysato heeso iyo ku dhameysan habka ee buuxa:
Sida lagu Helo Songs la Soundcloud Download Online
> Resource > Music > Dhagayso Spotify Music Free Via Spotify 3 bilood Free